देशसञ्चार - काठमाडौँ
मेरो निकट मित्र नै किन नहुन् झ्याम्म हान्दिउँजस्तो लाग्छ। परमपरोकारी डा. गोविन्द केसीलाई‘अनशन केसी’ भनेर बोल्दा।
मेरो बुझाइमा ती तपस्वीलाई होच्याउने शब्द हो त्यो। आदर गर्नु पर्ने एउटा सज्जनलाई होच्याउँदा मान्छेले पाउने खुसी के हो? तर आफ्नै मित्रसामू आफूलाई होच्याएको महशुस किन गर्दैन मान्छेले ? मान्छे आफू होच्चिन्छ दोषी अरुलाई बनाएर फेरि खुसी हुन्छ । तर त्यो खुसीले फेरि आफैंलाई होच्याउँछ । आफू होच्चिएको देख्दैन।
मैले डा. गोविन्द केसीलाई तीनचार पटक भेटेपछि मान्छे के हो भन्ने प्रश्नको जवाफ पाएँ । उनले दिएनन् । उनीभित्रै खोजेँ । मेरो अनुहारमा कुँदिएका आँखाले उनलाई एक आममान्छे देखे पनि मनका आँखाले अर्कै देखे– महान् मान्छे ।
महान् मान्छे त्यही हो जो आफूलाई आममान्छे ठान्छ । जो मान्छे जन्मन्छ, मान्छे भएर बाँच्छ र मान्छे बनेर मर्न चाहन्छ।
श्रद्धा के हो ? प्रेम के हो ? कसरी पलाउँछ? डा. गोविन्द केसी स्रोत नै हुन्, मेरा लागि ।
२७ वर्ष सेवा गरे । पेन्सनको पैसाले बाँचेका छन् । त्यही पैसाले गरिब–दुःखीलाई बचाउन खोज्छन् । देशको कानुनले मार्नुलाई घोर अपराध हो भन्छ । त्यही देशको सरकारले बचाउनुलाई त्योभन्दा ठूलो अपराध ठान्छ ।
कहिल्यै डाक्टर नदेखेका आफ्नै देशभित्र देशविहीन बनेका ‘देशका टुहुरा’ जनतालाई बचाउन खोज्दा डा. गोविन्द केसी अपराधी मानिन्छन् ।
चोरका बैरी चन्द्रमा भ्रष्टका इमान्दार, दुराचारीका सदाचारी र दुष्टका ठूला शत्रु सज्जन। राज्यको शत्रु भएका छन् ती परमपरोपकारी– गरीबका डा. गोविन्द केसी । केही गर्दैनन्– दिनदुःखी गरीबको निशुल्क उपचार गर्छन् । त्यही हो उनको अपराध।
प्रकाशित मिति: : 2020-09-21 20:07:14
एउटी नर्सको अनुभव- आफूलाई लागेपछि थाहा भयो कोरोना के हो?
आयोमेल - काठमाडौँ
रातोपाटी - काठमाडौँ
२/४ अर्ब घाटा हुँदैमा बैंकहरू डुबिहाल्ने अवस्थामा छैनन् : भुवनकुमार दाहाल, अध्यक्ष बैंकर्स संघ
कोरोनासँग जुध्नका लागि उपवास लाभदायक होला ?
नेपालद्वारा १०२ अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादी समूह तथा व्यक्तिको सम्पत्ति तथा कोष रोक्का
देखापढी - काठमाडौँ